Wasiir taageeray Banaanbaxa Mucaaradka ee maalinta Jimcaha | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasiir taageeray Banaanbaxa Mucaaradka ee maalinta Jimcaha
Wasiir taageeray Banaanbaxa Mucaaradka ee maalinta Jimcaha
Wasiirka amniga Maamulka Galmudug, ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Axmed Macalin Fiqi ayaa si cad u taageeray banaanbaxa mucaaradka DF ku baaqee in Jimcaha lagu qabto magaalada Muqdisho.
Inkastoo maamulka Galmudug ee uu hogaamiyo Madaxweyne Qoor-qoor uu taageersan yahay DF haddana Wasiir Fiqi ayaa u muuqda inuu weli la heysto saaxiibadiis hore ee mucaaradsan Farmaajo.
HOOS KA AKHRISO QORAALKA WASIIR FIQI
Musharixiinta madaxtinimada dalku maalin kasta waa banaan baxaan, maxaa ku jaban in xeerada la weyneeyo oo taageerayashooduna ay kala soo qeybgalaan ayagoo si amni ah ku qabsanaya?!.!
Sidoo kale waxaa banaan-baxyo aan tiro lahayn qabsada madaxweynaha iyo taageerayaashiisa ayadoo halkudhigyo, fanaanado sawiradiisu ay ku daabacan yihiin xiran, calanka dalka iyo kan Gobolka Banaadirna ay Daljirka Dahsoon ku xardhan yihiin?!
Intaas waxaa sii dheer in dastuurka dalku uu fasaxayo in banaanbaxyo nabadgalyo ah muwaadiniintu ay qabsan karaan!
Maalin walba ciid maahan, madaxtooyaduna meel lagu sii waarayo ma ahan sida cid walbaba ay ogsoon tahay, berito Marka banaanka la tago xuquuqda maanta aad diido adna ma helaysid, Marka inta ay le’eg tahay xorriyadda iyo xuquuqda muwaadinka ee aad bixiso maantay ayaa noqonaya keydka aad akoonkaada gashato, musharixiinta maantay dalbanaya banaanbaxana berito waxaa u taalla in aysan isku dayin diidmo xuquuqda ay u bukaan waqtigan la joogo ama ay dalbanayaan.
Dabacsanaantaada maantay waa Keydkaada berito.
Previous articleQilaaf xoogan oo ka jira maamulka Gobolka Banaadir
Next articleGabar lagu Kufsaday Xafiiska Gudoomiye Baarlamaan
Waxaan aad ula dhacay Riyada Prof Yaxye Sheekh Caamir
Hay’addda Hormuud Salaam Foundation oo wasaarada Caafimaadka iyo Maamulka Isbitalka Martini ku wareejisay 1,500 oo haamood oo Oksajiin ah .
Maxoow ku dhamaaday Kiiskii Dilkii Gudoomiyahii Degmada Hodan
Ciidamo Etoobiyaan ah oo lagu laayey xuduuda Sudaan
Al-shabaab oo dilay 5 ruux oo ay ku sheegeen Basaasiin u shaqeeya Reer Galbeedka
Saldhig ku yaala Ciraaq oo ay ku sugnaayeen ciidamo Amerikaan ah oo Gantaalo lagu garaacay Dalka Ciraaq.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhaw gaaray magaalada Dhuusomareeb ee caasimada Dowlada Goboleedka Galmudug. Garoonka...
Hay’addda Hormuud Salaam Foundation oo wasaarada Caafimaadka iyo Maamulka Isbitalka Martini...
Wasiir ka tirsan Dowlada Federaalka oo codsi u diray madaxda ku...
Mareykanka oo muwaadiniintiisa jooga muqdisho uga digtay inay maalinta Jimcaha ka...
Taagerayaasha Musharixiinta oo daabacay ku dhawaad 8.000 kun oo Xabo Sawirada,...
Xaaska Kim Jong-un oo markii ugu horreysay lagu arkay meel fagaara...
Al-shabaab oo dilay 5 ruux oo ay ku sheegeen Basaasiin u...
Haweenka dhuusamareeb Caruurtada kaga maqan yihiin Dhuusamareb oo farmaajo uga digay...